Norway oo soo qaadeyso Hooyo Daacish ku biirtay iyo ilmaheeda oo xanuunsan. - NorSom News
Norway oo soo qaadeyso Hooyo Daacish ku biirtay iyo ilmaheeda oo xanuunsan.
Wasiiradda arrimaha dibadda Norway, Ine Eriksen Søreide ayaa maanta shaacisay in dowlada Norway ay soo qaadeyso haweenay Pakistaani-Norwiiji ah oo horey Daacish uga tirsaneyd iyo labo ilmood oo ay dhashay, kaas oo midkood uu xanuunsanyahay.
Baarlamaanka Norway ayaa horey isugu raacay in hooyadaas aan Norway loo soo qaadin, balse dowlada ayaa sheegtay inay go´aansatay inay ilmaha xanuunsan gargaar bini-aadantinimo loo fidiyo, sidaas darteedna qoyska dhan lasoo wado qaado. Halkan kasii akhri
Haweenaydan iyo caruurteeda ayaa xiligan ku sugan xero qoxooti oo kutaal gudaha dalka Siiriya, waxeyna bilihii ugu danbeeyay si isdabo joog ah usoo direysay fariimo ku saabsanaa in la badbaadiyo iyada ilmaheeda.
Dowlada Norway ayaa horey haweeneydan usoo jeedisay inay ilmaheeda usoo gacangaliso dowlada Norway, si ay u helaan xanaaneyn, iyadana ay halkeeda joogto. Laakiin hooyada ayaa ku adkeysatay in iyada iyo ilmaheeda la wada badbaadiyo intii la kala kaxeyn lahaa. Waxeyna sheegtay inay diyaar u tahay in Norway lagu xiro, ayna maxkamad marto, hadii loogu ogolaanayo inay ilmaheeda daaweyn iyo xaneenyn helaan.
hey´adda PST-da ayaa horey haweeneydan ugu eedeysay ku biiritaanka Daacish, waxeyna u badantahay in xabsiga la dhigi doono marka ay garoonka diyaaradaha Oslo kasoo degto.
Xigasho/kilde: Norge henter hjem IS-siktet norsk kvinne og hennes barn
Previous articleXaalada caafimaad ee Boqorka Norway oo soo fiicnaatay.
Next articleWargeysyo: Porsgrun: Sadex Caruur soomaali ah oo aan iskuulka dib ugu soo noqon.